सैन फ्रान्सिस्कोमा सर्वश्रेष्ठ बार्स | सडकको लागि एक युगल
"सैन फ्रान्सिस्कोमा सर्वश्रेष्ठ बार्स" मामी म्याकडडेन - एक यात्रा ब्लगर र फ्रीलान्स लेखक द्वारा लिखित थियो। वास्तवमा कैलिफोर्नियाबाट, उनी 2013 पछि संसारलाई ढिलो ढिलो भएको छ। जब तिनी लेखन नगर्ने हो भने तपाई शिल्प बियरको पिटमा, झरना का पीछा गर्न सक्नुहुनेछ वा विदेशी भूमिमा उनको अर्को साहसिक योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, थाइल्याण्ड, ग्रीस र पोर्चुगलमा विदेश गएपछि पाँच वर्षको लागि तिनले अन्ततः केन्या फ्रान्सिस्को, सान फ्रान्सिस्कोमा एक घर भेट्टाए। तपाई उसलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम, फेसबुक, र उनको ब्लग, एटलास हार्ट.
एक छोटो राहत खोज्दै जहाँ तपाईं आफ्नो खुट्टाहरू आराम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको जाम-प्यान्ड सैन फ्रान्सिस्को खाली यात्रा कार्यक्रममा आराम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको तनावपूर्ण कामको हप्ता पछि किनारा लिनुको लागि तपाईं कहाँ जानुहुन्छ?
यो फ्रान्स फ्रान्सिस्कोमा रहन्छ र जो कहिलेकाहीं कहिलेकाहीं अल्कोहल पेय र रात बाहिर निस्केर मनपर्छ मनपर्ने व्यक्तिबाट लिनुहोस् - यी बारहरू केही फ्रान्सका फ्रान्सेलीमा पेय हान्ने सबै भन्दा राम्रो, पुरानो र सबैभन्दा मजेदार स्थान हुन्।
थप एडो बिना, यो मेरो सैन्य फ्रान्सिस्कोमा उत्कृष्ट बार्सहरूको लागि - क्लासिक पबहरूबाट तीमा रम बारहरूमा!
आयरिश-पब प्रेमिकाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न, म्याग्दी म्याग्रिरीको (वा मेग्गी) सैन फ्रान्सिस्कोको उत्तर बीच जिल्लामा एक लामो समयसम्म पब हो। क्लासिक आयरिश पब लाग्छ।
दिनको समयमा तपाईं स्थापना मा धेरै टिभी को एक पन्ट र एक स्पोर्ट खेल को लागि पप गर्न सक्नुहुन्छ, रात मा यो सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईंको दुई बाएं खुट्टा तैयार यो तैयार छ।
प्रत्येक हप्ताको अन्त्यको रात पट्टीमा प्रत्यक्ष कवर ब्यान्ड कलाकारहरू छन् जुन, फ्रान्स फ्रान्सिस्को चौंरीको सबैभन्दा बढी खुशीको लागि जो सबैभन्दा शुक्रवार र शनिवार रात यहाँ झुन्ड्याउँदछ।
तपाईं म्याग्दीको विशेष कार्यक्रमहरू पनि योजना गर्न सक्नुहुनेछ किनभने तिनीहरूसँग निजी बनाइने एक सेक्सन हो। तिनीहरूले स्नातक र Bachelorette पक्षहरू, जन्मदिनहरू, कार्य प्रकार्यहरू देखेका छन्, तपाइँ यसलाई नाम दिनुहुन्छ। तपाईंको आफ्नै लाइभ संगीतमा ल्याउनुहोस् वा धेरै आवरण ब्यान्डहरू मध्ये एउटा पुस्तक जसले तपाईंको चमक र छालामा कुनै पनि सप्ताहांतको रातमा चट्टानलाई ठोक्नुहोस्।
आफ्नो मनलाई आधुनिक हिटमा फ्याँक्नुहोस् र फ्याँकब्याकहरू समान रूपमा नृत्य गर्नुहोस् - तपाईले गम्भीर रूपमा विस्फोट गर्नुहुनेछ कुनै पनि समयमा तपाईं म्याग्दीमा जानुहुन्छ।
शहर मा केहि देश सलाखों मध्ये एक, जक्ससन मा एक जीवंत सैलून - मरीना मा अंतिम रात को लागि "रेट्रो देश" वाइब्स संग मिश्रित महसूस गरेको छ।
यद्यपि, यदि तपाई जक्ससन बारे स्थानीयलाई सोध्नुहुन्छ उनीहरूले अरूलाई चिन्ता र "भन्नका लागि यो ठाउँ धेरै खराब छ" भन्न सक्दछ, तर यदि तपाइँ लाइनहरु बीच पढ्नु हुन्छ भने तपाईलाई के थाहा छ साँच्चै यसो भनिन्छ कि जक्ससन यति राम्रो छ कि यो राम्रो छ। यो पट्टी छ कि मानिसहरू घृणा गर्न चाहन्छन् तर कतिपय स्थानीयहरू र यात्रीहरू रातीको अन्त सम्म समाप्त हुन्छन्।
यदि तपाईं वास्तवमा देश पट्टी अनुभव प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, आफैले भाग्यमानी विचार गर्नुहोस् कि जेक्ससनले रेखा नृत्य र हप्ताको सबैभन्दा बढी रातो संगीतलाई मेजबान गर्छ। तपाईं शर्त गर्न सक्नुहुन्छ कि यस स्थापनामा फायरबल दृश्यहरू छन्।
ब्ल्याक हर्स लन्डन पब
नयाँ (वा पुरानो) शहरमा साथी बनाउन को लागी एक राम्रो तरिका अन्य संरक्षक संग आरामदायक छ, जो ब्ल्याक होर्स मा सबै सजिलो छ लन्डन पब, 19ft एक्स 7ft मा सैन फ्रान्सिस्कोमा सबैभन्दा सानो पट्टी। सैन फ्रान्सिस्कोको बारेमा बिर्सनुहोस् - यो क्यानाडाको सबै भन्दा राम्रो सलाखहरू मध्ये एक हो! तपाईलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु आवश्यक छ वास्तवमा ब्रिटिश-प्रेरित पट्टी कति सानो छ।
ब्ल्याक हर्स मरीना जिल्लामा स्थानीय खजाना हो कि बियर र मात्र नकदी हो। कूलर (बेर पछि * * शाब्दिक बाथटब) मा बियरको साथ बिरुवा र केवल सावधान बुनाई प्रविधिहरु मार्फत र बाथरूम सुलभ मात्र हो जसले तपाईंको नयाँ मित्रहरुलाई, "जेम्स" बिग डग "राजा (बार मालिक र निविदा) लाई" माफ गर्नुहोस् " ) यकीन छ कि तपाईं यहाँ म रमाईलो समय छ।
बुना विस्टा क्याफे
छिमेकी: मछुआरेको घातक
ब्यूना विस्टा कैफे सैन फ्रान्सिस्को (अनुमान। 1916) मा सबै भन्दा पुरानो सलाखहरु मध्ये एक हो र आफनो शहर मा स्टेटल आयरिश कफी savant को रूप मा स्थापित गरेको छ। यो मूलतः फिशररको व्हार्टमा यसको कुनाको स्थानमा एक ऐतिहासिक स्थल हो र प्रसिद्धिको लागी दावी गर्न हाम्रो दाने फ्रान्सेली किनारा (र हृदय) लाई आयरिश कफी परिचय दिँदै छ।
यो दिनको लागि, तिनीहरूले XIUMX मा पहिलो पटक सुरू गरेको बेला तिनीहरूको आयरिश कफीको लागि सटीक उस्तै नुस्खा प्रयोग गर्दछ। दुवै पर्यटक र स्थानीयहरू केवल प्रसिद्ध कन्कोशन प्रयास गर्न र बाई सँगै खाने कुकुरको लागि बस्न लाइनमा पर्खनेछ।
यो अफवाह छ कि क्याफेले 30 मिलियन आयरिश Coffees को सेवा गरेको छ। तपाईंले भन्न सक्नुहुनेछ कि तिनीहरूले शायद अब सम्म नुस्खा पाएका छन्। यी हस्ताक्षर एसएफ क्लासिक्स मध्ये एक संग आफ्नो पेट मा पप र गरम गर्नुहोस्।
हाम्रो "पुरानो" विषय मा राखेर, उत्तरी स्टार क्याफे सैन फ्रान्सिस्कोमा सबैभन्दा पुरानो सलाख मध्ये एक हो।
यो उत्तरी बीचको हृदयमा सानो डुङ्गा र स्पोर्ट्स पट्टी हो। न केवल यो शहरको सबैभन्दा पुरानो सलाख मध्ये एक हो, तर यो सैन फ्रान्सिस्कोमा मात्र सलाख मध्ये एक हो जसले हरेक बफेलो, एन एन खेलकूद खेल देखाउँदछ। बिल जानुहोस् र सब्सक्राइजहरू जानुहोस्!
नि: शुल्क पपकर्नले ताजा तुल्याएको छ र तपाइँको ब्रेकको समयमा पछाडीको खेलबाट पछाडि पर्खिरहेको बेलामा, ट्याप वा तातो तातो मिश्रित ककटेलको बियरको मजा लिनुहोस्। बारहरू नयाँ संस्करण एक इलेक्ट्रोनिक जुकबक्स हो त्यसैले तपाईलाई निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँका मनपर्ने ट्युन्स 'रातभरि' बम्पिन हो।
रातो जावा हाउस
अल्ट्रा-आकस्मिक दोपहरमा रुचि छ? रातो र जावा हाउस सही SOMA मा खाडीमा छ। यो बाहिर (वा भित्र) भन्दा धेरै जस्तो देखिन्छ, तर यसले तपाईंको हॉप्स र हट कुत्ते cravings लाई निश्चित रूपमा पूरा गर्नेछ!
भित्र भित्र र बाहिर दुवैलाई भेट्न, तपाईं बेको दृश्यहरूको आनन्द उठाउँदा एक पिच लाग्न सक्नुहुन्छ र केहि कुत्तहरू वा स्वादिष्ट बर्गरलाई चम्किलो पार्न सक्नुहुन्छ।
छिमेकी: फिलिलमोर जिल्ला / पश्चिमी जोड
ऐनी मीटी, कुनै पनि राम्रो tiki बार को विरोध गर्न सक्दैन! धुम्रपानकर्ताको कोव स्यान फ्रान्सिस्को सिटी हॉलमा दाँया छ तर तपाईं तपाईंलाई शहरबाट बाहिर जानुपर्छ र टापु स्वर्गमा।
मुग्ललरको काभ एक किट्सी पट्टी हो जसले समुद्री डाकू-थीड सजावटको लगभग भारी मात्रामा सुविधा दिन्छ।
तिनीहरू 200 विभिन्न प्रकारका रम र धेरै विदेशी ककटेलहरूसँग मिश्रण गर्नका लागि छन्। यदि तपाईं उबाऊ पेय मनपर्छ भने अस्वीकार गर्नुहोस्, केहि पेयहरू टिकी पोस्ट, खोपड़ी वा व्हिस्की बैरल गिलासमा सेवा गर्न सकिन्छ।
यो ठाउँ मूलतया यदि उनीहरूले डिज्नील्यान्डमा एक बारमा समुद्री डाकूको क्यारिबियनको सवारी गर्न थाल्छन् भने बराबरको। यदि तपाईं त्यो ओभर-टु-टप तीजहरूमा हुनुहुन्न भने पनि ककटेल स्वादिष्ट छन्।
केहि थप उच्च वर्गको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ? मार्क्सको माथि नो हिलमा, मार्क होपकिन्स होटलको शीर्ष तल्लामा स्थित एक स्वादिष्ट ककटेल बार हो धेरै उनीहरूको जीवनको लागि बूजी क्षेत्र।
माथिको मार्कको शहरको 360 डिग्री अवलोकन र यसको हस्ताक्षर ककटेल को लागि प्रसिद्ध छ, "द फगल मार्टीनी", जुन कथा ले भन्यो कि सिङ्ग फ्रान्सिस्को आकाश देखि सीधा छ।
बो बो ककटेल लाउंज
एक भीडबाट बाहिर हटाउन, बो बो ककटेल लउन्ज (वा बस बो बोको) चिनीटाउनमा एक रमाइलो र मज्जादार कम्बो गोता र कराओके पट्टी हो।
तिनीहरू नियमित रूपमा ताजा र नि: शुल्क मूंगफलीको सेवा गर्छन् र सस्तो घरको बियर सबै दिन र राति आउँछन्।
यदि तपाइँ स्थानीय बार्टेन्डिङ किंवदंती (र मालिक), मामी कैंडी द्वारा सेवा गरिरहनु भएकोमा बोनस हो, जसले पर्याप्त संरक्षकको लागि पर्याप्त अर्थ राख्नेछ।
त्यहाँ तपाईंसँग छ! यदि तपाईं सैन फ्रान्सिस्को मार्फत आफ्नो बाटो पिउने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ वा शहरमा सुत्न अर्को दिउँसो मसाले खोज्नु उत्तम निर्देशन।
यदि तपाईं सान फ्रान्सिस्कोमा पेय गर्नका लागि थप स्थानहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने वा क्यालिफोर्नियामा पूर्ण रूपमा, मेरो बारेमा पोष्टको बारेमा जाँच नगर्नुहोस्। सर्वश्रेष्ठ क्यालिफोर्निया बियर प्रयास गर्न.
संतएड, proust, l'chaim, salud, and cheers!
श्रेणी: क्यालिफोर्निया, खाद्य र पेय, अतिथि पोस्टहरू, उत्तर अमेरिका, समीक्षा, संयुक्त राज्य अमेरिका टैग: बारहरू, ककटेल, पेय, सान फ्रान्सिस्को
← पालक र Feta- भरिएका Portobello मशरूम
जहाँ पेरिस मा रहन →